Movario With 360º RotaHead.
Movario With 360º RotaHead. Mavario သည် သင့် ရေချိူးခန်းကို Spa တစ်ဖွယ် သက်တောင့်သက်သာ နှင့် ဒီဇိုင်း လှပအောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ် ထားသော ဇိမ်ခံရေမှုန်၊ ရေမွှား ပုံစံ ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော ရေပန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။လက်ဖြင့် ကိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သလို နံရံကပ် တပ်ဆင်ထားပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ရေပန်းမှ ထွက်လာသော ရေကို နူးညံမှု နှင့် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေ၇န် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသုံးပြုရ ကောင်းမွန်စေသော ပစ္စည်း တစ်မျိူး ဖြစ်သည်။GROHE DreamSpray® နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကြောင့် ရေထုတ်လွတ်မှု အား ကောင်းခြင်း၊ ထုတ်လွတ်လိုက်သော ရေများကို နုညံမှုအထိအတွေ့ ရရှိ ခံစားနိုင်ခြင်း၊ အရေးပြား ပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း၊ လန်းဆန်း တက်ကြွမှု ပေးနိုင်ခြင်း၊ အခြားသော ခံစားမှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။The Movario shower သည် သင့်ကို ထူးခြားသော အထိအတွေ့ များ နေ့တိုင်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။Movario hand showers နှင့် Movario shower heads ကို GROHE’s patented ဖြင့် ရေပန်းကျ ပုံစံတူအောင် ထုတ်လုပ်ထားသည်။လူနေမှု အဆင့်တန်း မြင့်မားစေရန် Movario သည် အဆင့်မြင့် ရေချိူးခန်းသုံုးShower တစ်ခု ဖြစ်သည်။
Big capacity with Steam and6Motion Technology 9KG Front Load Wahing Machine F1480RDS 1400RPM6Motion DD Motor True Steam Smart Diagnosis
ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်သော အရေအသွေးမြင့်မာသော gas မီးဖိုများဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ FG 602 SVGL, FG 603 SVGL, FG 772 SVGL, FG 773 SVGL, FG2792 SVGL model များကိုလူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ Takara standard သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် ထုတ်လုပ်မှု သက်တမ်းရှိသော Kitchen Cabinet အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး Japan Kitchen Cabinet များအတွက်လည်း အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးရောင်းချလျက်ရှိပါကြောင်း လာရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Single hole ပစ္စည်းအမျိူးအစား ဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူ တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်သည်။သတ္တု လီဗာ ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် လှပဆန်းသစ် ပြီး အမြင်ဆန်းစေသော ဘေစင်သုံး ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ 28 mm ရှိပြီး ကြွေထည်ပစ္စည်း နှင့် သတ္တုများဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးမှုများ ပါဝင်ပြီး ရေစိုခံ Mousser ပါဝင်သည့် အတွက် သင့်အိမ် ဘေစင်ကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ် လှပစေသည်။ Pop-up စွန့်ပစ်မှု 1 1/4&quot;အထိ သတ်မှတ်ထားသည်။ပေါ့ပါးသွက်လပ်ပြီး အဖွင့်အပိတ် လွယ်ကူ သောကြောင့် အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေသည်။ရေလွတ်အား ကောင်းပြီး လျင်မြန်မှုကြောင့် တပ်ဆင် အသုံးပြုမှုကို စိတ်တိုင်းကျ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် မီးဖိုခန်းသုံး ဘေစင် အမျိူးအစား တစ်ခု ဖြစ်သည်။
Space, Style &amp; Sophistication To Spare 32 cu.ft. Mega Capacity 3-Door French Door Refrigerator LFXS32726S 32 cu.ft. Slim SpacePlus® Ice System EasyReach™ Bins Smart Cooling Plus System
Space and style to spare. 11 cu.ft Large Capacity 24” Wide Compact Top-Mount Refrigerator LG top-freezer-refrigerator (LTNC11121V) 11 cu.ft Premium LED Interior Lighting2Freezer Drawers Multi-Air Flow Cooling
Slide Chilled Case Three-Way Flexi Shelf Tempered Glass Shelf Egg Case Multi-free Pocket Big Tower Light Free Style box Bottle Pocket VEGETABLE ROOM Vegetable Case Vegetable Case Upper FREEZER Ice Box Freezer Case Upper &amp; Ice Box Ice Spoon Freezer Caser Lower OTHERS Multi Air Flow Cooling System Frost Free CFC Free Titanium Filter Deodorizer Minus Ion Vitamin Factory Door Alarm Auto Ice Making
• Inverter compressor • Air purification systems in the refrigerator Hygiene Fresh + • An LED lighting system • Long 10-year compressor warranty
• Energy Saving Smart Inverter Compressor • Multi Air Flow • Moist Balance Crisper • LED Lighting • EZ-Out Tray • Big Vegetable Box • Moist Balance Crisper • Multi Air Flow
• 481L Top Freezer/Fridge • Inverter • Hygiene Fresh • Pull Out Tray • Shiny Steel
MTWK ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည့် အီလတ်ထရော နစ်သုံး မီးဖို SGM M926 ကို တင်သွင်း ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက် ရှိပါ သည်။ ၄င်း မီးဖို ၏ အားသာချက်များ မှာ အနံ့ သက်ဆိုးများ ကင်းခြင်း ၊ မိမိ ကြိုက် နှစ်သက်ရာ ဟင်းများကို အလွယ် တကူ ချတ်ပြုတ်နိုင်ခြင်း ၊ သင့်တော်သော အပူ ရှိန်ဖြင့် အစားစားများ ကို ညီမျှ စွာ ကျက်စေခြင်း ၊ အာမခံ အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု ထားခြင်း ကြောင့်တာရှည် အသုံးပြု နိုင်ခြင်း ၊ အစားစားများကို လျင်မြန်စွာနွှေးယူ စားသုံးနိုင်ခြင်း တို့ ကြောင့် ၄င်း မီးဖို ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဝယ်ယူ အသုံးပြု လိုပါက MTWK ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Rainshower(TM) F-Series 20 inches Ceiling Shower Head Rainshower(TM) F-Series 20 inches Ceiling Shower Head
ခေတ်မှီ နည်းပညာ များဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော Digital Shower တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသာ ရေပန်းအမျိူးအစားဖြစ်သည်။ပါးလွှာသော မျက်နှာပြင် ဖြင့် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သင့်အိမ်ရေချိူးခန်းကို တင့်တယ်လှပစေသည်။အပူထိန်း ကိရိယာ ပါဝင်ပြီး Hand Shower လည်း ထည့်သွင်းထားသည်။နိုင်ငံတကာ ခေတ်မှီ နည်းပညာများဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေး ကို ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။သင့်ရေချိူးကို Digital Shower အသုံးခြင်းဖြင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။